Banky sary Creative Commons 12 ilaina ho an'ny mpamorona | Famoronana an-tserasera
Ao amin'ny Internet ananantsika banky sary matotra Creative Commons ary hamela anay hampiasa azy ireo amin'ny tranokalanay na amin'ny tetik'asa iray hanararaotana ny kalitao avo lenta izay heverina fa votoaty hita maso.
Izay no antony hanehoanay anao izay tranokala Creative Commons tsara indrindra hahafahanay mahita karazana lisansa telo: CC0 Public Domain, CC BY mitanisa ny mpanoratra ary CC BY-SA hitanisa ny mpanoratra amin'ny adidy tokony hizaranao izany atiny izany ny mpanoratra. Hanao izany amin'ny tranokala izahay manomboka izao izay hanamarihanao azy ireo ho tianao.
1 Ny tsy fitovizan'ny lisansa Creative Commons samihafa
Ny tsy fitovizan'ny lisansa Creative Commons samihafa
Alohan'ny handehananao ny lisitry ny tranokala mankany ampidino amina lisansa Creative Commons ity karazana sary ity, hodinihintsika ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'izy ireo. Ny tsy fitandremana ireo "adidy" na "fepetra" dia mety hitarika amin'ny fotoana fohy ny mpanoratra handefa antsika mailaka hanala ilay sary na hanao fanovana mikasika ny fampiasana ny atiny.
Ohatra iray amin'ireo manana fahazoan-dàlana ny lohateny sy ity miaraka amin'ny finday avo lenta, ka mandrosoa. Ireo no fahazoan-dàlana telo lehibe ahafahantsika mampiasa sary an'arivony an-tserasera:
CC0: an'ny sehatra ho an'ny daholobe ary midika izany fa afaka mampiasa an'io sary io isika nefa tsy misy karazana fepetra. Izany hoe, omen'ny mpanoratra antsika ny fahalalahana rehetra eto amin'izao tontolo izao hahafahantsika mampiasa izany amin'ny karazana tanjona. Raha atao teny hafa, asa tsy misy zon'ny mpamorona.
CC BY: amin'ity karazana fahazoan-dàlana Creative Commons ity dia voatery mitanisa ny mpanoratra na manaiky azy isika mba hahafahantsika mampakatra ny sary ao anaty bilaogy na hampiasa azy io amin'ny tetikasa iray hanondroana azy amin'ny pirinty kely amin'ny sanganasa iray.
CC BY-SA (Creative Commons Attribution-Share Alike): eto dia misy fahasamihafana lehibe amin'ilay teo aloha, satria ankoatry ny tsy maintsy mitanisa ny mpanoratra ny sary nampiasaina dia tsy maintsy manery an'izay te-hanaparitaka azy hizara azy izahay.
Ary raha, Manana motera fikarohana lehibe i Creative Commons hahafahantsika mikaroka ny karazan-tsary rehetra ary miaraka amin'ny fahatsapana ny fananana sivana ao amin'ny sisiny mba hanondroana hoe inona ny karazana fahazoan-dàlana tadiavinay. Ny marina dia miaraka amin'ny teny fikarohana sasany izahay dia nahita sary avo lenta izay tonga lafatra amin'ny karazana asa rehetra.
Izany no izy mitazona tsipika tena matihanina raha te hahita sary tsy dia nampiasaina loatra, noho izany dia iray amin'ireo tolo-kevitra voalohany amin'ity lisitr'ireo sary Creative Commons ity. Rehefa manokatra ny sary izay ananantsika amin'ny takelaka havanana ny fahafahan'ny maka tahaka ny kaody HTML, amin'ny lahatsoratra manankarena na lahatsoratra tsotra mba hitanisa ny mpanoratra na azonay atao ny manaparitaka ny sanganasany amin'ny fahazoan-dàlana fahatelo voalaza etsy ambony: CC BY-SA.
Tranonkala iray angamba tsy fantatrao fa misy sary an'arivony avy amin'ny sokajy maro samihafa. Ampy ny kalitao afaka mampiditra azy amin'ny karazana tetikasa. Tranonkala iray ahafahantsika mahita loharanom-pahalalana hafa maro hafa toa ny horonantsary na horonam-peo, ary misy sary stock ary koa maimaim-poana.
Marina izany fa ho an'ny afaka misintona sary Creative Commons amin'ny kalitao HD Mila misoratra anarana maimaim-poana isika, fa raha afaka manome ny angon-drakitra misy antsika dia hanana sary sy sary hafa iray hafa ho loharanon'ny sary kalitao. Aza mandany fotoana kely dia jereo.
Dreamstime - Web
Iray amin'ireo ankafizin'ny betsaka ny manana sary an'aliny maro karazana ary mazava ho azy, Creative Commons. Iray amin'ireo tranokala manana laza mendrika ary efa ela no nalaza io. Raha ao amin'ny motera fikarohana ataonao dia asio «Commons» dia hahita sary mihoatra ny 3.900 voatendry amin'io tag io izahay, noho izany dia iray amin'ireo ilaina indrindra amin'ity lisitra ity.
Ny zava-misy dia ao amin'ny pixel izy io mamela antsika hisintona azy amin'ny karazana tanjona rehetra. Mila mandalo ny reCAPTCHA ihany isika mba hanomezana antoka fa tsy bot isika ary azontsika atao ny misintona azy amin'ny famahana vahaolana mihoatra ny 3.000 teboka. Aza adino izany.
Pixel - Web
iray hafa tranokala ahafahanao miditra amin'ny atiny kalitao ho an'ny sary ary izay miavaka amin'ny filàna fisoratana anarana hidirana amin'ny fampidinana ny sarinao. Lazao aminao fa manana sokajy maro karazana izy, na dia marina aza fa tsy tonga amin'ny katalaogna malalaka izay mety misy loharanom-pahalalana hafa izay nasehonay tamin'ity lisitr'ireo sary Creative Commons ity.
Un endrika kely fotsiny ho an'ny tranonkala izay no tiana hatramin'ny voalohany. Marina fa angamba tsotra loatra izy io, na dia tsy midika aza izany fa fomba hafa azo ampiasaina hahitana karazana sary maimaimpoana.
Freepik, hafa tranonkala malaza Noho ny katalaoginy malaza izay misy karazana sary rehetra dia manana tranomboky natokana ho an'ny Creative Commons koa izy. Marina fa tsy dia be loatra io, fa ampy hanondroana fa afaka mankany aminy ianao hahazoana sary Creative Commons.
Raha atambatra, androany dia sary Creative Commons mihoatra ny 440, noho izany dia azontsika atao ny manonona azy io ho toy ny iray amin'ireo toerana mahaliana handinihana ny andavanandrontsika rehefa mila atiny miloko mahay. Tokony holazaintsika fa ireo loharano 440 ireo dia misy sary sy vektor.
iray hafa amin'ireo tranokala malalantsika loharano misokatra izy io koa dia misy eo afovoany ireo izay mankany amin'ny CC. Raha efa manana goavana ianao ary katalaogin'ny sary mivelatra malalaka, mamela anao hanana rohy izahay handehananao mivantana amin'ireo atiny natokana ho an'ny Creative Commons.
Iray amin'ireo Toerana tena ilaina very any ary afaka mamela anao hahatsapa ho eo alohan'ny tranokala natokana ho an'ny sary matihanina amin'ny ambaratonga avo indrindra izany. Ity dia Unsplash, koa aza maharitra manokatra ny rohy mankany amin'ny tranonkalany.
iray hafa tranokala fananana izay toy ny hafa amin'ity lisitra ityAmin'ny maha-pixel anao azy, ny atiny rehetra hitanao amin'ny tranokalany dia ho azo ampiasaina maimaimpoana. Raha ny marina dia izy ireo ihany no manao dokam-barotra fa ny sary rehetra hitanao ao amin'ny Pexels dia azo ampiasaina maimaim-poana.
Raha ny marina raha ny ankamaroan'ny sary izay hitanao fa iharan'ny fahazoan-dàlana Pexels, ny hafa mifandray amin'ny Creative Commons Zero CCO. Samy mamela antsika hampiasa ny sary rehetra miaraka amina fahazoan-dàlana ara-barotra sy tsy ara-barotra, tsy mila mitanisa ny mpanoratra izahay, ary afaka manitsy araka izay azonay atao amin'ny fahalalahana rehetra eto amin'izao tontolo izao. Iray amin'ireo tranokala hafa koa tokony handraisana anao hanome izany atiny kalitao amin'ny asanao.
iray hafa avy amin'ireo tranonkala malaza indrindra sary ary ao anatiny no ahitantsika ireo karazana mpampiasa, na ireo amateur na ireo matihanina, izay natokana ho an'ny tontolon'ny sary. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny zavatra andefasanay anao dia eo amin'ny tranonkala iray izay ankoatry ny fahafahantsika misintona sary Creative Commons, dia azonay atao ihany koa ny mampiasa azy io hankafizanao ny asa izay ataon'ny sasany, na hampiakarinay mihitsy ny sarinay avy amin'ny mombamomba ny mpampiasa.
Si ao amin'ny browser-nao dia apetrakao «Creative Commons» hahita sary miavosa tsara isika. Mety ho loharanom-pahalalana tsy mety ritra io raha manam-potoana hikaroham-bahaolana eo amin'ireo mpanoratra azy isika ary hahita ireo lisansa telo voalaza etsy am-piandohan'ity lahatsoratra ity. Manentana anao izahay hiezaka satria tsy fantatrao izay ho hitanao miaraka amin'ny faharetana sy finiavana kely avy aminao.
Eny ny Ny fikarohana Google dia manolotra fahaizana mikaroka sary ary ny sary amin'ny alàlan'ny fametrahana fotsiny ny sokajy sy ny fampiasana ny "fampiasana ara-barotra".
antsika mankany amin'ny kiheba "sary" izahay ary mametraka teny fikarohana. Rehefa manome ny valiny dia mankany amin'ny fitaovana isika ary ao amin'ny kiheba hafa «Ny zon'ny fampiasana» dia hampiasa Creative Commons izahay. Hahita sary an-jatony azontsika ampiasaina amin'ny tetikasanay izahay. Eto dia mety ho tsy manam-petra ny fikarohana ka manolo-kevitra ny hitovy amin'ny an'ny Flickr ianao, mba hanananao faharetana sy fahavononanao hitady an'io sary manokana io. Efa fantatray ny Google ...
Tranonkala hafa mitovy amin'ny sasany amin'ireo voalaza ho Unsplash na pixel ary amin'ity indray mitoraka ity dia hoentin'ny sesitany lehibe ao anaty interface izy ary izany dia miteraka antsipiriany momba ny traikefan'ny mpampiasa.
Si napetraka tao amin'ny milina fikarohana Gratisography "Creative Commons" hahita sary marobe isan-karazany miaraka amin'izany tanjona izany isika, koa tranokala iray hafa hampiasana sy hankafizantsika azy.
Gratisography - Web
iray hafa tranokala sary maimaimpoana ary misy Creative Commons ihany koa. Na dia tsy manana izany katalaoginy lehibe izany aza izy ireo dia manompo anay amin'ireto torolàlana ireto izy ireo hahazoana sary izay azonay ampiasaina amin'ny karazana asa rehetra.
Manana a endrika endrika bilaogy, noho izany dia mila mijery ireo sary nakarina isika hahitana ireo vaovao indrindra. Sehatra nomerika iray hafa miaraka amina loharano manandanja raha sanatria misy olon-kafa tsy mahavita antsika ary tsy hitantsika ilay sokajy ilaintsika hamoronana atiny somary miavaka; na dia mihasarotra aza ny fanatanterahana izany raha tsy izahay no tompon'andraikitra amin'ny fakana sary.
Adobe manao a andro maromaro dia nandamina sary maro (Fananana 70.000 XNUMX+) avy amin'ireo mpanakanto izay mandray anjara amin'ny Adobe Stock, ny tranonkalanao famandrihana ho an'ny sary kalitao matihanina. Izany dia manana banky sary tsy mbola nisy toa azy ianao ary izany dia manokatra varavarana hanana izay tsara indrindra eto an-tananay.
Sin misalasala fihetsika mahery vaika nataon'ny Adobe ary izany dia miaraka amin'ny fanakorontanana nataon'ny digital tamin'ny fiainantsika tamin'ity taona 2020 ity ary nametraka ireo orinasa ho amin'ny toerana terena hanova ny endriny nomerika. Aza adino izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Banky sary 12 Creative Commons
Ny safidy tsara indrindra amin'ny Photoshop